အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: July 2007
လာလာ..လေ..ဒို့ နဲ့ တူတူရပ်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:11 PM0comments
ဒို့အားလုံးဟာ..သူပုန်၊..ကိုယ်.့.အမျိုးဂုဏ်အတွက်..
သူ့ ဘ၀ ရဲ့သမိုင်းအစ..
ကြောက်လန့် စွာ ကျမ..
တခါမှ မတွေ့ ဘူးခဲ့တဲ့ ဒီသူပုန်လူ..
လူသူစုဆောင်း ..ရရာလက်နက်အပေါင်းနဲ့ တော်လှန်
စစ်တပ်ကကြည့်တော့ ဒို့ သူပုန်များ..
ဟေ့..ဒို့ ကမှတကဲ့ ပြည်သူစစ်သား..
ဒီနေ့ ခေတ်ရဲ့ ..အာဏာရှင်စံနစ်..
မှန်ကန် မြင့်မြတ်လိ်ု သူ..
(မသဒ္ဓါ ) ရ။၂ရ။၂၀၀ရ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:58 AM2comments
ဇာတိမာန် နဲ့ ..ရဲသွေးပြောင်
၈၈၈၈ ကျောင်းသား.မောင်လေး၊ညီမလေး..အာဇာနည်များသို့ ..။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:53 AM0comments
သွေးစွန်းခဲ့သော နေ့ များမှသည်..ခွပ်ဒေါင်း.ကမဲ့ နေ့ ရက်များသို့ 
ဒို့ လူ့ ဘောင်သစ်..အစ။။
မသဒ္ဓါ (၇။၂၅။၂၀၀၇).. ၈၈၈၈ ရဲ့ ၁၉ နှစ်ဟာ အခုထိသွေးစိုဆဲ..ကာလပါ။လင်းလက်မဲ့ အနာဂတ်ဟာဒို့ တွေ လက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ အဖေလက်ထက်မနိူင်ရင်တောင်..သားသမီးလက်ထက်မှာ..နိုင်နိုင်ပါတယ်.။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:29 PM0comments
ဒို့ ဝိညာဉ်ကို..မင်းတို့ အသေသတ်နိုင်မယ်..ထင်သလား..
ငါတို့ တတွေ ဟာ…၈၈၈၈ ကျောင်းသားများ။
မသဒ္ဓါ (၇။၂၃ ။၂၀၀၇)။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:33 AM0comments
စိတ်ကူး..ယဉ်ဘ၀ထဲက ထွက်ခဲ့ဖို့မင်း အချိန်တန်..
ဒဏ္ဍာရီထဲက.. ရွှေမင်းသမီးလေးလား..
ချမ်းသာမှုအတိပြီး..လောင်မီးတညီးညီးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလား
ရောင်ရဲ မှုအတိပြီးတဲ့ ..ပျော်ရွင်စရာ.အေးချမ်းမှုလား..
ရွှေဘုံပေါ် လှောင်ချိုင့်စံ..အတောင်ပန်မခိုင်တဲ့ဘ၀..
၀ီရိယ.အားသန်..ဆူး ဒီခြုံကို အမြစ်ကလှန်..
မင်း ကြည့်ရှု မြင်နိုင်စေ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:37 PM0comments
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့်တကွ..မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းစဉ် တလျှောက် အသက်သွေးချွေးစတေး ပေးလှူခဲ့ သော.အမည်မသိ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ အားလုံးအား လေးစားစွာ ဂါရ၀ဖြင့်..အလေးပြုအပ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရောက်..အမိမြေကို ချစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများ။
(လိုအပ်သုများ လာယူနိုင်ပါသည်။ ဇူလိုင်(၁၉) ရက်နေ့ တွင် ငြိမ်သက်စွာ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:25 AM0comments
Labels: photo, Politics Poster
သာကီမျိုးရိုးနဲ့မြန်မာပြည်..
ပြိုကျ ဖူးလိမ့်မည် မဟုတ်။
မြန်မာမြေပေါ် ဦးဆွေး ဆံမြေ့နေထိုင်သွား
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခလေးနှစ်ယောက် နဲ့ လုပ်ကိုင်စား၊
ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ခံရလိမ့်မည် မဟုတ်။
အမွေးအတောင်ကျွတ်အောင် ခွပ်စရာမလိုမဲ့ ဥဒေါင်းမင်း၊
ရိပ်ကြီးခို ဆုတောင်းတောင်၊ မလွတ်မလပ်၊
သူတို့ ကလွဲ ရင်..တပြည်လုံးငတ်ပြတ်၊
လက်နက်မဲ့ ခလေးတွေကိုတည့်တည့်ပစ်တာ.. ဒီစစ်တပ်
ဘိန်းရာဇာတွေကို ဖော်လံဖား..ဦးချရဲတာ.. ဒီစစ်တပ်..
တင့်တယ်ရမည့် တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊
သူတို့ ကြောင့်.ကမ္ဘာ့ အောက်ဆုံးမှာ၊
အစ ကပြန်စဖို့ ..အားလုံးဟာ သမိုင်းပေး၊
လွတ်လပ်ရေး မျှတရေး..ပေါင်းစည်းရေး နိုးကြားရေး၊
ငွေအား လူအား၊ လက်နက်အား..စိတ်စွမ်းအား
တာဝန်သိဒို့ ပေါင်းကာ၊ ညီညာလုပ်နိုင်မှ၊
အသက်စွန့် ခဲ့ကြကျိ်ိုး..သူ ကျေနပ်နိုင်ပါစေ.။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:56 PM 1 comments
မေ့မရ နိုင်..သည်းမြေ့စိုင်..၁၉ ရက်.ဇူလိုင်..
အာဇာနည်ရဲ့ နေ့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:32 PM 1 comments
နိုင်ငံချစ်တဲ့ အဖေ က..
အမှောင်ချထားတဲ့ ..ဒီမိုကရေစီနဲ့ 
တက္ကသိုလ်ထဲက မြေအလွတ် ကွက်လပ်..
” ကြည်..ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား ရရင်စားချင်တယ်“ ရိုးရိုးလေး ပြောမဲ့ ယောက်ျား
ပါရမီ ဖြည့်ချင်သူများနဲ့ လွဲကြရ.
ခေတ်နဲ့ စံနစ်ဆိုး..အာဇာနည် မိသားစုမျိုးရိုးတွေကိုသတ်ခဲ့
ရှာလေလေ ဝေး..ရွှေပြည်တော်လည်း ဝေးချေပြီ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:29 AM3comments
၇ - ၇ - ၆၂ ကို မမေ့ကြနဲ့။
မန္တလေးဆောင်ရဲ့ နံရံပေါ်က ဒေါင်းသွေးအန်ီစက်
သမဂ္ဂ ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်..
ပုဇွန်တောင်တံတား နဲ့ စက်ဆန်း
သွေး ကမ္ဗလာပြင် လွှမ်း..
ဒို့ များလွတ်မြောက်ရေးသို့ ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:43 AM 1 comments
ဟောင်းနွမ်းနေသော စာလုံးများနှင့် အပ်ကြောင်းထပ်နေသော စကားလုံးများ။
ဆန့် ကျင်သူတွေကို စွပ်စွဲကြ
တိုင်းပြည်ဖြိုခွဲသူ ဒို့ ရန်သူ
ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးလို့ 
ခိုင်မာသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံ ပေါ်ပေါက်ရေး
ခောတ်မှီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ် ပေါ်ပေါက်ရေး
စာလုံးပြောင်းကာ အမျိုးမျိုးရေး၊ အထပ်တရာ ပလာတာတောင် အရှုံးပေး။
ဆူဆူပူပူလုပ်လေသူဟု မလိုတမာ ပိုကာများပြီး၊
စွပ်စွဲယှဉ်တု၊ ပြည်သူလူထု ဒို့ မမှု။
နောက်ကျိနေတဲ့ ရေမြောင်းထဲက အပုပ်အသိုးဟောင်းများလိုဘဲ
မဆလ န၀တ နအဖ စာလုံးများသာ လဲသွားတယ်
၀ါဖန့် ဖန့်ရိရွဲရွဲ စာအုပ်ပြဲက မမဲ မထင်ေ၀၀ါးဝါးအသွင်
အမြင်မှာ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့စာလုံးများ။
အာပုတ်ခံတွင်း ညှစ်ဆင်းဆင်းနဲ့မုသားမကင်း
အညာတသောသောနဲ့တွဲကာရောတဲ့၊
ချီးတွင်းထဲမှာ မျှောနေတဲ့ လောက်ပိုးများလို
တိုင်းပြည်ကို အမှန်စကား ဘယ်တော့မှ မပြောကြားဘဲ၊
အဖျက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ကာထားတဲ့ ပြောကြားစကား
ယုံရမှာလား၊ အပ်ကြောင်းထပ်နေသော စကားလုံးများ။
ဝေးဝေးသွား - ဟောင်းနွမ်းနေသော စာလုံးများ - ဝေးဝေးထား။
ဝေးဝေးထား - အပ်ကြောင်းထပ်နေသော စကားလုံးများ - ဝေးဝေးသွား။
(မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖနှင့် နောက်ပါတစ်စုတို့ အတွက် အထူးစပ်ဖွဲ့ သည်။)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:15 AM 1 comments
ရောင်စုံဒေါင်းကလေးများ ရဲ.့ .လျောက် လဲ ချက်
မာန နှင့် မာန် အသေခံစွန့်လွှတ်ရဲ.
ဘ၀ထဲက ပထမ အရွယ်.
၀န်းကျင်နဲ့အညီ. အရောင်များ..ပြောင်း
မြက်ခင်းကြား က.. မြစိမ်းရောင်ဒေါင်း
အိုးဝေတွန်သံသာသာ..အနီရောင်သွေး..နီစွေး ဒို့ ရင်မှာ။
နောင်တနေ့ အရောက်ပြန်..ဒို့ ရာဇ၀င်ကြွေးဆပ်ရန်.
ပွဲမပြီးခင်..ကဲ့ရဲ့ မဆိုကြပါနဲ့ ..
ဒေါင်းကလေးတွေ..မ down ကျသေးပါ ဘု..
တနေ့ နေ့ ရောက်ရ မှာ..ဒို့ ရဲ့ပန်းတိုင်..
ကအိုးဝေသံ တို့ ..မြိုင်မြိုင်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:04 PM5comments
ကိုယ့် အလုပ် ကုိ ကိုယ် လုပ်တဲ့နေရာ.
အမြင်ကပ် ပုဒ်မနဲ့ အပြစ်စွဲ..
မိသားစုနဲ့ ခွဲ..စာဖတ်သူတွေနဲ့ လွဲ..
လွတ်လပ်နေသော ကျွန်တော်၏ ၀ိညာဉ်
အမှန်တရားမြတ်နိုးသူသွေးသောက် ဦးဝင်းတင် သို့ ဂုဏ် ပြု ပါသည်။
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ ဆရာ့၏ ၀ိညာဉ် အား ပြည်သူအားလုံးကဂုဏ်ပြုပြီး
အမြန်ဆုံးသံတိုင်ကြားမှ အချုပ်အနှောင်ခန္ဓာအား လွတ်မြောက်နိုင်ပါရန် မသဒ္ဓါ မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။.လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေချစ်သောဆရာ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:47 AM 1 comments
ကြွားဝါ မှု မရှိ..ပကတိရိုးသားဖြောင့်မတ်
အများအတွက်ဆို အသက်ကိုစွန့် ရဲ
လမ်းကြမ်းကန္တာ..ဆူးမွေ့ ယာလည်း
မြန်မာမြေထက်မှ.. ဇူလိုင်မျိုးစက်ကလေးများနဲ့ အတူ..
အနှစ် ( ၆၀) ရှည်ကြာခဲ့လည်း..
ကျမတို့ လွမ်းရပါ့ ..
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တကွ ကိုးဦးသော.အာဇာနည်..
ရောက်ရာ ဘုံဘ၀မှ မသွေ...သာဓု..ခေါ် နိုင်စေ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:58 PM0comments
ကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်ဘွဲ့ ကို..မဟုတ် အဟုတ်လုပ်
ကောင်းကျိုး တခုမှ..ပြု ခဲ့ ရိုး မရှိ
ရွာသားကောင်းမှု ကို..မျက်နှာပြောင် နဲ့ ရေစက် ချ
နိဗ္ဗါန် ရောက် မယ် များ ထင်သလား..
ငရဲ အပေါက်ဝ. တိုကင်ယူ..တန်းစီသာထား..ကိုယ်လူ..
ကြေးပြားတွေ..ပုံစံ အမျိုး မျိုးသွန်းလုပ်
ဖဲပြားရောင်စုံ နဲ့ .. ကြိုးဆွဲချ..
နင်တဖတ်..ငါ တ ချပ်..
ရင်ဘတ်ပေါ် အပြည့်တင်..ဆုတံဆိပ် ဆင်ထား
ကျမတို့ ရဲ့ စစ်တပ် က ဦးသျှောင် ( ခေါင်းရှောင်ကြီးများ)..
ဘယ် ပွဲတွေ..တိုက်လို့ဘာဆုတွေ ရ.
ဒို့ ပြည်သူ မသိရ
တိုင်းပြည် ထွက်ကုန်..ရောင်းရ သမျှ
ပြည်တွင်းမှာ လုယက်..ပြည်သူ တွေကိုနှိပ်စက်
သူတ်ို့ ဘဲ ရွှေမင်းသား..သူတို့ ဘဲ တရားသူကြီး..
သူတ်ို့ ဘဲ ဇာတ်လိုက်..သူတို့ ဘဲ လူ ကြမ်း..
သူတို့ ဘဲ သူတော်စင်..သူတို့ ဘဲဆောင်ကြာမြိုင် ၀င်
သားသမီးနဲ့ မြေး..ဟိုတယ်ပေါ် ပါတီ ပေး..
လမ်းဘေး ကလေးလေး တွေက..စာသင်ခန်း တွေနဲ့ ဝေး
ခွေး သောက် တဲ့ ထမင်း ရည်လေး တောင် နပ်မ မှန် ရ..
သင်..ဘယ်လို အစိုးရ ပါလဲ ကိုယ့်လူ
သူတို့ လူပါကျိန်တွယ် ပြောတောင်..မြန်မာများ က မယုံ..
ကမ္ဘာက ပိုတောင် ဆိုးသေး..
ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်း ကတောင် ဒီလောက်မငတ်
အလှူ ရေစက် လက်နဲ့ ဒို့ မကွာ..
ဆီကို ရေချိုး ဆေးရိုး မီးလှုံ..စပါးတောင် လိုပုံခဲ့..
မင်း တရား တို့ ခု ခေတ်ရဲ့ဗမာ..(အဲလေ..မြန်မာဆိုတဲ့ နံမည်အသစ်)
ရွှံ့နွံ့ အိုင် ထည်းမှာ ညစ်ပေခဲ့ပြီ..
ပြောရဲရင် ပြောစမ်း ပါ..
ဘယ်သူ က ဗမာကို ချစ်သည်.
ဘယ်သူ က ဗမာ အစစ်..ဆိုတာသည်.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:11 PM0comments
ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေးပြု
ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများသို့အထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ကျဆုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ တိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို အာဇာနည် ၉ ဦးအား နှစ်အဆက်ဆက် ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်မှာ ကျနော်တို့ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အစိုးရလက်ထက်တွင် မှေးမှိန်ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအာဇာနည် ၉ ဦးမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးဘ၀င်း၊ မန်းဘခိုင်၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စ၀်စံထွန်း၊ ဦးရာဇတ်၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ သခင်မြ၊ ဦးအုန်းမောင်နှင့် ရဲဘော်ကိုထွေး တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျနော်တို့ ဘလော့ဂါများမှလည်း နိုင်ငံ၏ သားကောင်းရတနာများ ဖြစ်သည်နှင့် အားလျော်စွာ ထို အာဇာနည် ၉ ဦးကို သိတတ်သည်နှင့်အညီ ဂုဏ်ပြုရမည့် ၀တ္တရား ရှိပါသည်။
တိုင်းပြည်အတွက် သိတတ်သော ဘလော့ဂါများအနေနှင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ဂုဏ်ပြုသောအနေနှင့် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပုံများကို မိမိတို့ ဘလော့ တစ်နေရာတွင် ယနေ့ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ အထိ ချိတ်ဆွဲပေးထားကြပါရန် ကျနော်တို့အားလုံးမှ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:23 PM0comments
သွေးစွန်းခဲ့သော နေ့ များမှသည်..ခွပ်ဒေါင်း.ကမဲ့ နေ ...
ဟောင်းနွမ်းနေသော စာလုံးများနှင့် အပ်ကြောင်းထပ်နေသေ...